चिसोमा छालालाई सुख्खा हुनबाट कसरी जोगाउने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
चिसोमा छालालाई सुख्खा हुनबाट कसरी जोगाउने?
कमला गुरुङ बिहिबार, माघ १५, २०७७, ०६:३७:००
काठमाडौं- चिसोमा अधिकांशको छाला सुख्खा हुने, फुट्ने, औंलाहरु सुन्निने लगायत समस्या निम्तिने गर्छ। कतिपयले आवश्यक स्याहार नगर्दा छालामा विभिन्न समस्या देखिन्छ भने कतिपयमा हेलचेक्र्यार्इंका कारण पनि हुनसक्छ।
न्यानोपनका लागि चिसोमा धेरैले आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने र एयर कन्डिसन (एसी) को प्रयोग गर्छन्। यी सबैले पनि छालालाई सुख्खा बनाउने छाला रोग विशेषज्ञ प्राडा सबिना भट्टराई बताउँछिन्। चिसोमा चिल्लो र पानीको मात्रा कम हुँदा पनि छाला सुख्खा हुन्छ। छाला सुख्खा हुँदा शरीर चिलाउने समस्या पनि निम्तिने डा भट्टराईले बताउँछिन्।
योसँगै चिसोमा हुने छालासम्बन्धी समस्याहरु केके छन्? छालालाई चिसोमा के–कसरी जोगाउन सकिन्छ? लगायत विषयमा हामीले छालारोग विशेषज्ञ डा भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंशः
चिसोमा निम्तिने छाला सम्बन्धी समस्या केके छन्?
- चिसो बढेसँगै छाला सम्बन्धी विभिन्न समस्या निम्तिन्छन्।
- छाला सुख्खा हुने, चिरा पर्ने, फुट्ने, चिलाउने, औंलाहरु सुन्निने, निलो हुने समस्या हुन्छ।
- चिसोले कपालका जराहरु सुख्खा हुने, चिलाउने समस्या पनि देखिन्छ।
- चिसोमा यी समस्या लिएर आउने बिरामीको संख्या पनि धेरै छ।
चिसोमा अधिकांशको छाला फुट्छ। कतिको त चिरा परेर रगत पनि आउँछ। यी समस्या किन हुन्छ?
- छालामा पानी र चिल्लोको मात्रा मिलेर रहेको हुन्छ।
- उमेर बढ्दै जाँदा शरीरमा पानी र चिल्लोको मात्रा कम हुँदै जान्छ।
- चिसोमा आगो ताप्दा, हिटर बाल्दा र तातो एसी चलाउँदा छाला सुख्खा हुन्छ।
- शरीरमा चिल्लो र पानीको मात्रा कम हुँदा शरीर चिलाउने, फुट्ने समस्या हुन्छ।
यो समस्या बढी कुन उमेर समूहमा देखिन्छ?
- छाला सुख्खा हुने र फुट्ने समस्या उमेरसँग सम्बन्धित छ।
- यो समस्या विशेषगरी ४० वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरुमा बढी देखिन्छ।
- थाइरोइड, कोलेस्टेरोलको समस्या भएका व्यक्तिमा पनि यो समस्या देखिन्छ।
- चिसोमा छाला चिलाउने र सुख्खा भएरै उत्पन्न हुने रोगहरु धेरै छन्।
चिसोमा छालालाई सुख्खा हुन र फुट्नबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ?
- महिलामा घामले चाया–पोतो आउने र छालाको चमक हराउने हुन्छ।
- चिसोमा पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु आवश्यक छ।
- नुहाउँदा धेरै तातो पानीले नुहाउनु हुँदैन।
- नुहाइसकेपछि शरीरमा नरिवलको तेल वा मोस्चराइजर लगाउनुपर्छ।
- कपालमा सोप फ्री साबुन र सल्फर फ्री स्याम्पुको प्रयोग गर्नुपर्छ।
- चिसोमा घाममा बस्ने भएकाले सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुपर्छ।
- पोषिलो तथा स्वस्थकर खानेकुरा खानुपर्छ।
- हप्तामा एक पटक तेल लगाएर नुहाए शरीर सुख्खा हुन पाउँदैन।